काेराेनाबाट थप दुईको मृत्यु, ३२३ जनामा संक्रमण पुष्टि - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । रोना भाइरस संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका–३ का ५८ वर्षीय पुरुषको र धनगढी ४ की ५५ वर्षीया महिलाको पनि कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन । यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ३२३ जना कोरोना संक्रमित थप भएका छन । शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थप ३२३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार यो सँगै मुलुकमा संक्रमितको संख्या ३ हजार २३५ पुगेको बताए । त्यस्तै गत २४ घन्टामा डिस्चार्ज हुनेमा थप ३२ जना रहेका छन् । यसरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या ३६५ रहेको छ ।